Akụkọ - ihe ọmụma resin mgbanwe cation
A na-eji resins mgbanwe mgbanwe iji gwọọ hyperkalemia site n'ịgbalite mfu nke potassium site na eriri afọ, ọkachasị n'ihe gbasara mmamịrị na-adịghị mma ma ọ bụ tupu ịrịa ọrịa (ụzọ kachasị dị irè isi gwọọ hyperkalemia). The resins nwere nchịkọta nke nnukwu ụmụ irighiri mmiri na -ebu ebubo na -adịghị mma, nke na -ejikọkwa ion (cations) ebubo dị mma; ndị a na -agbanwere ngwa ngwa na cations na gburugburu mmiri ruo n'ókè nke dabere na mmekọrita ha maka resin na itinye uche ha.
Mbipụta juputara na sodium ma ọ bụ calcium na -agbanwe cations ndị a ọkachasị na cations potassium n'ime eriri afọ (ihe dị ka 1 mmol potassium kwa g resin); a na -amịkọrọ cations a tọhapụrụ atọ (calcium ma ọ bụ sodium) na resin na mgbakwunye potassium na -abanye n'ime nsị. Ihe resin ahụ na -egbochi ọ bụghị ịmịkọrọ potassium, kama ọ na -ewepụtakwa potassium nke a na -etinyekarị n'ime eriri afọ ma na -agbazigharị.
Na hyperkalemia, enwere ike iji nchịkwa ọnụ ma ọ bụ njigide njigide nke resin polystyrene sulphonate. Ekwesịrị iji resin sodium-phase (Resonium A) mee ihe na ndị ọrịa nwere akụrụ ma ọ bụ nkụchi obi n'ihi na oke sodium nwere ike bute. Akụkụ resin nke calcium (Calcium Resonium) nwere ike ibute hypercalcaemia ma ekwesịrị izere ya na ndị ọrịa nwere atụmanya, dịka ndị nwere ọtụtụ myeloma, carcinoma metastatic, hyperparathyroidism na sarcoidosis. N'ọnụ ọnụ, ha enweghị ike ịnabata ya, yana dịka ndị ọrịa enemas anaghị enwe ike ijigide ha ogologo oge ọ dị mkpa (opekata mpe elekere 9) iji gbanwee potassium na saịtị niile dị na resin.
Oge ezipụ: Jun-24-2021